बसमा यात्रा गर्दा वान्ता हुन्छ? यस्ता छन् रोक्ने घरेलु उपाय :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
बसमा यात्रा गर्दा वान्ता हुन्छ? यस्ता छन् रोक्ने घरेलु उपाय
शनिबार, चैत १६, २०७५, २०:०९:००
प्रश्न : मलाई बसमा यात्रा गर्दा वान्ता हुने समस्या छ। यो समस्याबाट छुटकारा पाउने कुनै घरेलु उपाय छैन? - आर पौडेल
डा जया सत्यालको उत्तर : यात्रा गर्दा शरीरका इन्द्रीयहरु आँखा, कान आदिले सन्तुलित ढंगबाट आ–आफ्नो कार्य गर्न नसक्दा मोसन सिकनेस अर्थात यात्राजन्य वान्ता उत्पन्न हुन्छ। मोसन सिकनेस पनि व्यक्तिपिच्छे फरक–फरक हुन्छ। कसैलाई सवारी साधन जस्तैः– बस, ट्याक्सी, हवाईजहाज चढेको केही मिनेटमै सुरु हुन्छ भने कसैलाई घन्टौं पछि। मोसन सिकनेस भएमा यात्रा साह्रै कष्टकर हुन्छ। अतः आफ्नो यात्रा सुखदायी र रमाईलो बनाउनका लागि हाम्रै घर भान्सामा प्रयोग हुने केही प्रभावकारी घरेलु उपाय र औषधीय गुणयुक्त जडिबुटीको बारेमा जानकारी लिई राखौं।